I-Apple TV + iyaqhubeka nokufikelela kwizivumelwano ezibeka phambili ukhetho | Ndisuka mac
I-Apple TV + iyaqhubeka nokufikelela kwizivumelwano ezibeka phambili kukhetho
Ukusukela ngaphambi kokumiliselwa kweApple TV +, ngo-Matshi 2019, u-Apple wayesebenze ixesha elithile ukuba afikelele izivumelwano zokusebenzisana nenani elikhulu labalawuli, ababhali besikrini, abadlali, abavelisi… Sizibonile ezinye zeziqhamo zale ntsebenziswano kumsitho we-Apple TV +.
Ngokucacileyo, iApple ayinakuphumla kwi-laurels yayo kwaye iyaqhubeka nokuthethathethana ngokwahlukileyo izivumelwano eziphambili ngenani elikhulu leenkampani zemveliso. Eyokugqibela athe wayifikelela, ngokwexesha elibekiweyo, ikunye noSiân Heder, umboniso woluhlu olukhona kwiApple TV Amancinci eMelika Kwaye ubuye wasebenzisana kwifilimu i-CODA.
USiân Heder ufikelele kwi Isivumelwano esiphambili xa ukhetha wonke umxholo owenzayo, ukuze iApple ihlale inokhetho lokuqala lokuthenga wonke umxholo okwangoku ophuhlisayo kunye neeprojekthi ezizayo apho uHeder asebenza khona, nokuba ngumvelisi, umbhali wesikrini okanye umbonisi.
Isihloko esilandelayo esinxulumene nalo mdlali, umbhali wesikrini kunye nombhali ngumdlalo bhanyabhanya CODA, Ifilimu enamalungelo eAppleefunyenwe ebutsheni balo nyaka kuMnyhadala weFilimu weSundance. I-CODA ibhaliwe kwaye ikhokelwe nguSiân Heder kwaye iya kudlalwa okokuqala ngo-Agasti 13 kwi-Apple TV +. Ukuza kuthi ga ngoku, iApple ayikasibonisi netreyila kule bhanyabhanya.
Amancinci eMelika, Olunye uthotho apho uSiân Heder ahambelana khona, ivuselelwe ixesha lesibini, nangona okwangoku kungekho mhla ucwangciselwe inkulumbuso. Ngapha koko, kubonakala ngathi ukurekhodwa kweli xesha lesibini akukakaqali.
UHeder wayekhe wasebenzisana ngaphambili uthotho ngempumelelo njenge Indlela kaHulu, Orange i Black New yeNetflix nakwifilimu Tallulah, Ifilimu yakhe yokuqala eyaqala ukuboniswa ngo-2016.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple TV + iyaqhubeka nokufikelela kwizivumelwano ezibeka phambili kukhetho
Uyenza njani iAudio yendawo kwiMac yakho
Kungekudala iApple iza kuphehlelela i-beta yokuqala ye-firmware ye-AirPods Pro